The Irrawaddy's Blog: သင်္ကြန်မှာ အမှားမရှိအောင် ပျော်ပါ
သင်္ကြန်မှာ အမှားမရှိအောင် ပျော်ပါ
BA Geography, မြိတ်တက္ကသိုလ်
အဝေးသင် ပထမနှစ်၊ ဥပဒေ၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်
. နိုင်တံခွန် နဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာရှင် (ဓာတ်ပုံများ - ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
. နိုင်တံခွန်ရဲ့ စိတ်ကူးများ၊ အမြင်များ
ကျနော့် အနာဂတ်စိတ်ကူး အကြီးမားဆုံး ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကတော့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက် ဖြစ်ချင်တာပါ။ သရုပ်ဆောင်တယောက်သာ မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် ကျနော် စီးပွားရေးအလုပ်နဲ့ပဲ ရပ်တည် သွားမှာပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက ကျနော်ဖြစ်ချင်တာ စစ်ဗိုလ်ကြီးတွေ ဘာတွေ ဖြစ်ချင်တယ်။ ကြီးလာတဲ့အခါ အဲဒါ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး။ ဆယ်တန်းလောက်ရောက်တော့ ကျနော် အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။ နောက် ကျနော် ဘောလုံးသမား ဖြစ်ချင်ခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီကနေပြီးမှ အိမ်ကနေ ပံ့ပိုးမှုတွေကော၊ ကျနော်ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ဝါသနာကနေ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို စပြီး ဝါသနာပါလာတာပါ။
လက်ရှိမှာကျနော် စကားဝါ သရုပ်ဆောင်သင်တန်းမှာ တက်နေတာ တနှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားပြီ။ အဲဒီမှာ ကျနော် သရုပ်ဆောင်ပညာ ဆည်းပူးတယ်။ အပြင်ကနေလည်း ကျနော် ရရင်ရသလို ပညာဝမ်းစာ ဆည်းပူးနေပါတယ်။ အားကစားထဲမှာ ကျနော် ဘောလုံးကန်ရတာ ဝါသနာပါတယ်။ အားရင်အားသလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆုံပြီး ဘောလုံးကန်ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်း နားထောင်ရတာလည်း ဝါသနာပါတယ်။ ဘယ်လို ဂီတအမျိုးအစားကို ကြိုက်သလဲဆိုတော့ ကျနော် အဓိက ကတော့ pop နဲ့ Classic အမျိုးအစားတွေ ကြိုက်ပါတယ်။ အဆိုတော်တွေထဲမှာ Rဇာနည်ကို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ “ဂန္ထဝင်ဆည်းဆာ” သီချင်းကို တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်။
Facebook သုံးတဲ့အခါ ကျနော် နေ့စဉ် Activity လေးတွေ တင်ဖြစ်တယ်။ ကျနော် ရိုက်ဖြစ်တဲ့ ဟာလေးတွေပေါ့။ ပြီးတော့ အဝေးရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း Facebook ကနေ ဆက်သွယ်ပြီး စကားပြော ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား ကိုယ့်အတွက် ဗဟုသုတရမယ့် ဝဘ်ဆိုက်တွေလည်း ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကြန်ဆိုရင် စိတ်ခံစားချက်ကတော့ နှစ်တိုင်းပျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က သင်္ကြန်ဆိုရင် လျှောက်မလည်ဖြစ်ဘူး။ အိမ်မှာပဲနေတာများတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်လည်း အရင်နှစ်တွေလိုပဲ အိမ်မှာပဲ နေဖြစ်မှာပါ။ သူများတွေ ရေကစားနေတာမြင်ရင်တော့ ပျော်ပါတယ်။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်ကျတော့ မပျော်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ သင်္ကြန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် သင်္ကြန်ကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ကို မြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက် ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်။ ပျော်တာကတော့ ပျော်ပါ။ အရက်သောက်လို့ အရမ်းမူးရူး ပြီး ပြဿနာဖြစ်တာတို့က မကောင်းပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ယောကျာ်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပေမယ့် ပျော်တဲ့နေရာမှာ အမှားမရှိအောင် ပျော်သင့်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
(ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ထုတ် The Irrawaddy ဂျာနယ်မှာ ပါဝင်တဲ့ လူငယ်နဲ့ ခေတ်ရေစီးကဏ္ဍကနေ ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်)
Posted in: Beauty and Fashion , Thiha Toe , ဖက်ရှင် နဲ့ အလှအပ , ယဉ်ကျေးမှု , အမြင်